Indlu yaseCreek ~ Hlala ngasemva kwaye uphumle kwiPine!
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uTony iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Wamkelekile kwiNdlu yaseCreek! Le yenye yeendawo zamanzi ezinobubele kunye nepropathi yomzila kaloliwe yangaphambili ime ngokugqibeleleyo phakathi kwePine Creek kunye nePine Creek Rail Trail. Irenki yePine Creek njengendawo ephezulu yokufikela yee-Anglers kunye nabathanda ngaphandle. Ukukhwela isikhephe, ukukhwela iphenyane, kunye nekayaking zezinye zeendlela ezilungileyo zokuva ubuhle bomwonyo! Umzila kaloliwe weemayile ezingama-65 ulungele ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela intaba, ukubaleka kunye ne-Cross Country Skiing kwaye yabekwa kwindawo ye-Top 10 yokukhwela ibhayisekile yi-USA namhlanje.
Esi siko sakhiwe nge-3,400 yeenyawo zesikwere ekhaya sineendawo zokulala ezi-4 zesintu, indawo ephakamileyo enesilingi ephantsi elala ezine ngaphezulu kwegaraji yokuzonwabisa, kunye nesofa yokumkani entsha entsha kwigumbi lokuhlala losapho elingama-550. Iibhafu ezi-2 ezigcweleyo kunye neebhafu ezi-2-1/2 ziyenza ilungele ukuya kuthi ga kwiintsapho ezi-3. I-Master Bedroom ine-whirl pool tub kunye nebhedi yosuku ephezulu/esezantsi enemibono emangalisayo yePine Creek! Ukuhlala kumgangatho kunye nomgodi womlilo zezona ndawo zifanelekileyo zokubukela yonke into enokuthi ibonelelwe yindalo. Bhukisha ukuhlala kwakho...siyazi ukuba uyakuyonwabela indawo ye-Slate Run kangangoko sisenza! Phinda ujonge uhlaziyo!
Hlala emva, phumla kwaye uphumle kwiPine!
Ikhaya lethu lelinye lamakhaya amathathu ekupheleni kweYoder Lane kwilali yaseSlate Run, PA. Akukho makhaya ummelwane kuthi emantla. Ibala lenkampu laseTomb Flats lingamakhulu ambalwa eemitha ukusuka emantla. Akukho makhaya ngaphaya kwePine Creek ngoko umbono ongasemva wendlu ngumlambo kunye neentaba! Ukuhlala kwiveranda engaphambili unokubukela abahambahambayo, ababalekayo, iibhayisekile kunye nabatyibiliki belizwe elinqumlayo kwiPine Creek Rail-Trail. Kukho kwakhona utshintsho olukhulu uya kubona amaxhama, amaxhalanga kunye nebhere ngamaxesha athile.
Asiyi kubakho ngexesha lokuhlala kwakho kodwa unokusibona ekuqaleni okanye ekupheleni. Nokuba kunjalo, sinokufikelelwa ngefowuni/itekisi/i-imeyile. Lonke ulwazi loqhagamshelwano luya kuba ngaphakathi ekhaya. Uya kufuna ukwenza ukuFowuna kweWi-Fi kwifowuni yakho (jonga ikhonkco leSelula kwiisetingi) njengoko kungekho fowuni yasekhaya okanye inkonzo yeselula. Inkonzo yeseli iyafumaneka kwiWolfe's General Store kunye neHotele Manor ngaphantsi kweemayile ezimbini.
Asiyi kubakho ngexesha lokuhlala kwakho kodwa unokusibona ekuqaleni okanye ekupheleni. Nokuba kunjalo, sinokufikelelwa ngefowuni/itekisi/i-imeyile. Lonke ulwazi loqhagamshelwano lu…